Meeqa qof ayay Sweden sharci siiyay 2010 | Somaliska
Sweden ayaa dad fara badan sharci siisay sanadkii la soo dhaafay ee 2010 ayadoo inta badan dadkaas lagu siiyay sharciga ayagoo qaraabo u ujoogto Sweden. Guud ahaan dadka sharciga deganaanshaha ka helay Sweden ayaa gaaray 91458 qof ayadoo 25067 qof oo ka mid ah dadkaas ay ku heleen sharciga xiriir famil dartiis kuwaasoo 3166 ay qaraabooda sharci qaxootinimo ku joogaan Sweden. Tiradaas dambe ayaa muujineysa isbedelka ku yimid sanadki ka horeeyay ee 2009 taasoo dad ka badan 9,000 qof ay ku heleen sharciga sababtoo ah qaraabadooda oo qaxootinimo ku jooga Sweden. Hoos u dhacaan aadka u wayn ayaa laga yaabaa in uu muujinayo shuruuda lagu xiray Soomaalida. Sidoo kale 21584 qof ayaa sharci deganaansho ka helay Sweden ka dib markii ay viiso shaqo ka heleen wadankaan. Dhinaca kale sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa kor u kacay dadka iska dhiibay Sweden kuwaasoo gaarayay 31819 ayadoo inta badan ay ka yimaadeen wadanka Serbia, halka Soomaalida ay labaad ahaayeen, Soomaalida iska dhiibtay Sweden sanadkii 2010 ay gaaraysa 5553 qof. Guud ahaan dadkii iska dhiibay Sweden sanadkii 2010 ayaa waxaa sharci la siiyay 12 130 qof ayadoo inta kale ama la diiday ama aan wali goaan laga gaarin. Migrationsverket
Sweden ayaa dad fara badan sharci siisay sanadkii la soo dhaafay ee 2010 ayadoo inta badan dadkaas lagu siiyay sharciga ayagoo qaraabo u ujoogto Sweden. Guud ahaan dadka sharciga deganaanshaha ka helay Sweden ayaa gaaray 91458 qof ayadoo 25067 qof oo ka mid ah dadkaas ay ku heleen sharciga xiriir famil dartiis kuwaasoo 3166 ay qaraabooda sharci qaxootinimo ku joogaan Sweden.
Tiradaas dambe ayaa muujineysa isbedelka ku yimid sanadki ka horeeyay ee 2009 taasoo dad ka badan 9,000 qof ay ku heleen sharciga sababtoo ah qaraabadooda oo qaxootinimo ku jooga Sweden. Hoos u dhacaan aadka u wayn ayaa laga yaabaa in uu muujinayo shuruuda lagu xiray Soomaalida.
Sidoo kale 21584 qof ayaa sharci deganaansho ka helay Sweden ka dib markii ay viiso shaqo ka heleen wadankaan.
Dhinaca kale sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa kor u kacay dadka iska dhiibay Sweden kuwaasoo gaarayay 31819 ayadoo inta badan ay ka yimaadeen wadanka Serbia, halka Soomaalida ay labaad ahaayeen, Soomaalida iska dhiibtay Sweden sanadkii 2010 ay gaaraysa 5553 qof.
Guud ahaan dadkii iska dhiibay Sweden sanadkii 2010 ayaa waxaa sharci la siiyay 12 130 qof ayadoo inta kale ama la diiday ama aan wali goaan laga gaarin.